Kuraira kweanopfuura mamirioni zana A100 Bionic machipisi eiyo iPhone 15 | IPhone nhau
Kuraira kweanopfuura mamirioni zana A100 Bionic machipisi eiyo iPhone 15
Vamwe Masosi padyo neTSMC anoratidza kuti iyo Cupertino kambani ingadai yakaraira anopfuura zana mamirioni Chips kubva ku100 Bionic yezvinhu zvako zve iPhone 13. Aya maPhones matsva anofanirwa kuburitswa munaGunyana unotevera saka zvinokwanisika kuti uku kudiwa kwemachipisi ichokwadi chose.
Zvichida iyi processor ichawedzerwawo mune iyo mini mini mamodheru inotarisirwa kupera kwegore rino, saka kudiwa kunofanirwa kuve kwakakwira kuzadzisa zvinodiwa naApple. Mupfungwa iyi, izvo zvatiri pachena nezvazvo ndeyekuti inotevera iPhone inofanirwa kuve neyakaenzana stock ye processor.
Kufungidzira kwekutengesa kwemhando idzi nyowani dze iPhone kwakakwira, saka Apple inotarisirwa kugadzira angangoita mamirioni zana ePhones gore rino. Gore rakapera 100, kambani yakaburitsa 2020 mamirioni emidziyo, saka zvakafanira kuvhara kanenge huwandu uhu uye saka Apple inowedzerawo makumi maviri nemashanu emamiriyoni mukugadzira. Maitiro ekugadzira eaya matsva processor ndeye 5 nm.
Chirevo chatakaona nhasi chakaburitswa pane inozivikanwa webhusaiti MacRumors inoratidza kuti chip chinotevera chinosanganisira matanhatu-epakati CPU ane mana epamusoro-anoshanda macores uye maviri epamusoro-ekuita cores. Izvo zvinoita sekunge pachiratidzu ichave neyakagadziriswazve mwero we120 Hz seyenhema, zvingangowedzerwa iyo «Nguva dzose inoratidzwa» skrini kamera iri nani yekumashure kana imwe module yekamera yakasiyana uye kumwe kuvandudzwa kukuru pane iyi modhi iyo inofanirwa kunge iri yekutengesa zvakanyanya maererano nevanoongorora.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 13 » Kuraira kweanopfuura mamirioni zana A100 Bionic machipisi eiyo iPhone 15
Sekureva kwaGurman, Chiso ID ichasvika paMac mumakore mashoma
Titanium Alloy ye iPhone 14 Pro Chassis